Malunga nathi-Edlon Wood Products Co, Ltd.
I-Antislip-Imiboniso bhanyabhanya-yePlywood-yeNqanaba-lokuSenyuka-kwaye-iTreyini yokuLanda
Imveliso ye-Edlon Wood Co, Ltd.
I-Edlon Wood Products Co, Ltd yasekwa ngo-2003, embindini we-HuaiHai zone yezoqoqosho, ityebile ngezinto zeenkuni kunye nabasebenzi abanobuchule. Sisoloko sigxila kwizisombululo zeenkuni zokhuni ukufayilishwa kunye nokwenza ifenitshala, Iimveliso zethu eziphambili ziqulethe INDAWO YOKUGQIBELA, I-FILM FACED PLYWOOD, I-DoorsKIN PLYWOOD kunye ne-HPL PLYWOOD, iintlobo ezininzi zebhodi yamatyala kubandakanya iPETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE ..... .
Silandela ukusetyenziswa okuzinzileyo kwezixhobo zeenkuni ngokusebenzisa umgangatho kuqala, sisoloko sakha igama elihle nelicocekileyo i-EDLONWOOD, oko kuqinisekisa imigaqo-siseko ethembekileyo kunye neyona nto iphakamileyo kubo bonke abathengi bethu abaxabisekileyo.
Inkqubo yokuvelisa yeplywood
Lawula ngokungqongqo yonke inkqubo yokufikelela kumgangatho ozinzileyo, ukuhambisa ngexesha kunye neendleko ezinokulawuleka
Umgangatho wokuqala uqinisekiswa yinkqubo yolawulo lomgangatho lwe-ISO. Siye saqinisekiswa yi-EU. Ukuqinisekiswa kwe-EC; I-ISO9001: Inkqubo yolawulo esemgangathweni engama-2000; Isatifikethi se-US CarB kwaye sinyanzelekile ukuba sihambelane nemigangatho yenqanaba lesizwe le-GB kunye ne-HPVA. Silandele rhoqo "kumgangatho wokusinda, isithunzi sokuzikhusela, uphuhliso lolawulo oluqinisekileyo" ifilosofi yeshishini kunye nokuphumeza imigangatho ye-GB / T9001-2000 kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho. Inkqubo yokulawulwa komgangatho we-5S ukuyisebenzisa ngokungqongqo, inokwenza ukuqinisekiswa komgangatho kuphuculwe kakhulu.
Amaxabiso okhuphiswano angabonelelwa kuba umzi-mveliso uphakathi kumbindi woqoqosho lweHaiiHai, ecaleni kweJiangSu, ShanDong, HeNan, AnHui, iziko lephondo ezine, kwindawo yokuhanjiswa kwempahla, kwaye sikufuphi namazibuko e-QingDao naseLianYunGang. Ukuba sisityebi kwizixhobo ezenziwe ngamaplanga kunye nexabiso eliphantsi kodwa elinabasebenzi abanobuchule, uqinisekisa ukuba amaxabiso ethu ayakhuphisana kwaye umgangatho oluluhle ulunge ngexabiso eliphantsi.
Inkonzo ehamba phambili, iqela lokuthengisa eliqeqeshiweyo, unxibelelwano olusebenzayo, kunye namaxwebhu achanekileyo, kuyakwenza ukuba ube ngumthengi onelisekileyo. Ngokusekwe kukunyaniseka kwethu okungcono, imigaqo-siseko yokuqala esemgangathweni, amaxabiso okhuphiswano kunye neyona nkonzo ibalaseleyo, sifuna ukwabelana ngezinto zethu ezicebileyo zaseTshayina nabaxumi bethu abahloniphekileyo bafumana izibonelelo eziphezulu xa ujongene no-Edlon.
Ifowuni: 0086- (0) 516-66688198
Tags - Hot Products - eKhaya
Umahluko phakathi kweplywood kunye ne-bl ...
Ukukhetha ifenitshala, eyokuqala ...
Cofa iipaneli zepaneli
Ukusetyenziswa okukhulu kweplywood